War deg deg ah-Saraakiishii ugu muhiimsanaa oo shaqo joojin ku dhawaaqay iyo cabsi laga qabo IN Alshabaab.. – Puntland News.net
Home 2017 February 5 Somali News War deg deg ah-Saraakiishii ugu muhiimsanaa oo shaqo joojin ku dhawaaqay iyo cabsi laga qabo IN Alshabaab..
War deg deg ah-Saraakiishii ugu muhiimsanaa oo shaqo joojin ku dhawaaqay iyo cabsi laga qabo IN Alshabaab..
February 5, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 2
Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya qaarkood ayaa ku hanjabay shaqo joojin iyo inay kasoo baxayaan furamahooda, ayaga oo ka carreysan halka lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhaceysa sideeda bishan.
Doorashada oo markii hore la qorsheeyey in lagu qabto Xarunta Dugsiga Tababarka Booliska ee School Polizio, ayaa waxaa hadda lagu warramayaa in loo wareejiyey dhisme ku yaala inta u dhaxeyso Garoonka Aadan Cadde iyo Xaruntii Ciidamada Cirka ee Afisyoone, oo ciidamada Amisom iyo beesha caalamka ay maamulaan.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii musharaxiin badan, gaar ahaan Sheekh Shariif, Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid ay dalbadeen in doorashada lagu qabto Xalane, ayaga oo sheegay inaysan ku kalsooneyn inay amnigooda sugaan ciidamada Soomaalida.
Si kastaba, saraakiil ka tirsan ciidamada Dowlada ayaa sheegay inay arrintan u arkaan sharaf dhac lagu sameynayo ciidamada qaranka iyo magaca Soomaaliya, sidaas darteedna aysan aqbali karin.
“Waxaa yaab leh in marna ay leeyihiin dalka shisheeye ayaa haysta, marna ay leeyihiin Soomaalida kuma kalsoonin oo shisheeyaha hana ilaaliyo” waxaa sidaas yiri sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga oo codsaday inaan la magacaabin.
2 thoughts on “War deg deg ah-Saraakiishii ugu muhiimsanaa oo shaqo joojin ku dhawaaqay iyo cabsi laga qabo IN Alshabaab..”
Hassan faarax February 5, 2017 at 7:44 pm · Edit
Tani waa sharaf dhac
Hassan faarax February 5, 2017 at 7:46 pm · Edit
Halagu kalsoonaaado ciidanka dalka sidee ayay madax unoqonayaan kuwa leh kuma kalsoonin ciidanka somaaliyeed